Puerto Rico - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: Puerto Rico
ဥရုဂွေး - ပထမလေးကြိမ်စမ်းသပ်ပြီးသော Coronavirus ကိစ္စများအတည်ပြုသည်
မတ်လ 14, 2020 မတ်လ 14, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဥရုဂွေးအစိုးရသည်နယ်စပ်တစိတ်တပိုင်းအားပိတ်ပစ်ခြင်း၊ လူထုပြပွဲများရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းတို့ကိုကြေငြာခဲ့သည် COVID-19 ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၄ ခုကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီးနောက်။ မွေးစားမည့်အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ “ အန္တရာယ်ကျရောက်နေသော” သို့မဟုတ်လက်ခဏာလက္ခဏာများဟုကြေငြာထားသောနိုင်ငံများမှခရီးသည်များအတွက်မဖြစ်မနေ ၁၄ ရက်ကြာအာမခံချက်ရှိလိမ့်မည်။
Three's Company: Wanda Vazquez သည်တရားရုံးချုပ်မှအပြီးအပတ်တွင်တတိယမြောက် Puerto Rican အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသည်
သြဂုတ်လ 8, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
မင်းတို့ဒီသီချင်းကိုမင်းကြားဖူးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုရပ်တန့်ပါ၊ ဒါပေမယ့် Puerto Rico မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်တစ်ခုရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပြီးတွင်တရားရေး ၀ န်ကြီး Wanda Vazquez သည်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pedro Pierluisi မဟုတ်ဘဲတပတ်အတွင်းအမေရိကန်ဓနသဟာယအဖွဲ့၏တတိယမြောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာသည်။ Vazquez သည်အရှက်ခွဲခံရသည့်ယခင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Ricardo Rossello ကိုသစ္စာစောင့်သိသူဖြစ်သည်။ မည်သူမျှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဖြစ်လိုသောအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ သူမဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်တွန့်ဆုတ်နေသည့်အစိုးရ၏အကြီးအကဲရာထူးကိုလက်ခံခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 30, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
Puerto Rico ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လိုသူ embattled လက်ရှိရီကာဒို Rossello အတူ "Rickyleaks" စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအရှုပ်တော်ပုံကျော်ရုံးနှုတ်ထွက်ပြီးလျှင်, နှင့်သြဂုတ်လ2ရက်နေ့တွင်ရာထူးမှထွက်ခွာရန်, လာမယ့်တန်းစီလိမ့်မည်ဟုသူမအလုပ်မလိုချင်ကြဘူး။ သူ့ကိုအာဏာမှနှင်ထုတ်လိုက်သူတွေကသူမကိုလည်းမလိုချင်ဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်းနှင့်ယူအက်စ်ဓနသဟာယတို့တွင်အသေးအဖွဲဆက်တိုက်အကျပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်စေပြီး Puerto Rican လူထုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်း Rossello အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သူ၏လိုလားသူ New Progressive Party တို့၏နောက်ကွယ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များထွက်ပေါ်လာသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးနောက် Puerto Rico တွင်ဆန္ဒပြသူများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်
ဇူလိုင်လ 26, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ကာရစ်ဘီယံကျွန်းပေါ်ရှိနိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းသည်မပြီးဆုံးသေးပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရီကာဒို Rossello နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ပင် နိုင်ငံရေးတည်ထောင်ခြင်းအပေါ်ဒေါသကထောင်နှင့်ချီသောလူများလမ်းမများပေါ်သို့တွန်းပို့နေသည်.
“ ခွေးကောင်တွေ! ခွေးကလေး! ဘာမှကုန်ကျစရာမလိုဘူး” ဟုဆန္ဒပြသူများကိုလူတ ဦး အော်ဟစ်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ရေကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေသည်။ တောင်မှပြီးနောက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရီကာဒို Rossello ၏နှုတ်ထွက်စာထောင်ပေါင်းများစွာသည် San Juan တွင်ထပ်မံစုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ သူတို့သည်ကခုန်ခြင်း၊ မြို့တော်လမ်းများကိုဖြတ်ပြီးဟီရမ်ဘစ်ထရွန်ဘေ့စ်ဘောအားကစားကွင်းကိုဖြတ်ကျော်ကြသည်။
Puerto Rico အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ricardo Rossello သည်လူထုဆန္ဒပြပွဲများအပြီးရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်
ဇူလိုင်လ 25, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Puerto Rican အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရီကာဒို Rossello အမျိုးသမီးများ၊ လိင်တူချစ်သူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမအပေါ်ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ပြောဆိုမှုများအပြီးရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အကြာလူထုဆန္ဒပြပွဲများအပြီးတွင်သူ၏နုတ်ထွက်မှုအားကြေငြာခဲ့သည်။ ဟာရီကိန်းမာရီယာ။ သြစတြေးလျမှသောကြာနေ့မှ ၁၇၀၀ နာရီအထိအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးမှနုတ်ထွက်မည်ဟုယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ အစိုးရက။
Puerto Ricans သည်“ Ricky Leaks” အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးမှနုတ်ထွက်မည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 21, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
အစပိုင်းတွင်အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာအရှုပ်တော်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တွင်အသေးအဖွဲမဟုတ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည့် Puerto Rico တွင်နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရီကာဒို Rossello ၏ရာထူးမှနုတ်ထွက်ရန်ထောင်ပေါင်းများစွာသောဆန္ဒပြသူများသည်စန်းစွန်း Juan လမ်းများသို့စနေနေ့သို့ထွက်သွားကြသည်။ Rossello နှင့်သူ၏စက်ဝိုင်းအတွင်းအကြား“ Ricky Leaks” ဟုအမည်တပ်ထားသောစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလွန်ခဲ့သည့်အပတ်ကဖွင့်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်အမေရိကန်ဓနသဟာယနေထိုင်သူများ - သူတို့ကိုယ်သူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ - အတွက်လူထုအုံကြွမှုသည်ကျွန်းများပေါ်တွင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရန်မတတ်နိူင်တော့ပါ။
Puerto Rico အကျင့်ပျက်ခြစားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အဖမ်းခံရလေးခု; အန္တရာယ်အတွက်ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေများ
ဇူလိုင်လ 12, 2019 သြဂုတ်လ 10, 2019 ရောဘတ်မာတင် (CN ဝန်ထမ်း)	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကအဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်တင်မှုအားဖုံးကွယ်ထားသည့်အတွက်အစိုးရအရာရှိဟောင်းနှစ် ဦး ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ကျွန်းပေါ်ရှိပညာရေးအတွင်းရေးမှူးဟောင်းဂျူလီယာကေလီယာနှင့် Puerto Rico ၏ကျန်းမာရေးအာမခံစီမံခန့်ခွဲမှုကိုစီမံခန့်ခွဲသော Angela Avila-Marrero တို့ကို FBI မှအခြားသူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်အစိုးရစာချုပ်များတွင်ဒေါ်လာ ၁၅.၅ သန်းကိုသူတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ညွှန်ကြားသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်ကျွန်းအားနှစ်ပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးအခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရန်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကူအညီနှင့်တောင်းခံမှုများကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။